Friedrich Schiller University of Jena - Imfundo eYurophu
Friedrich Schiller University of Jena Iinkcukacha
isixeko : Jena
isifinyezo : FSU
Zifumaneke : 1558
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa Friedrich Schiller University of Jena
Babhalise kwi Friedrich Schiller University of Jena
Friedrich Schiller University Jena i eyunivesithi uphando osendaweni ku Jena, eThuringia, Jemani.
Yunivesithi yasekwa 1558 kwaye ibalwe phakathi 10 Iidyunivesithi mdala Germany. Kokuba baseyinxalenye 6 Nobel Prize abaphumeleleyo, kutshanje inkoliso 2000 xa Jena ophumelele Herbert Kroemer waphumelela kaNobel physics. Kwathiwa igama emva kokuba imbongi Friedrich Schiller owayefundisa njengoko unjingalwazi bulumko xa Jena umdla ezinye iingqondo anempembelelo ekupheleni kwenkulungwane ye-19. Kunye Karl Leonhard lukaReinhold, UJohann Gottlieb Fichte, G. W. F. ka Krestu, F. W. J. Schelling kunye Friedrich von Schlegel abasebenzi bayo ekufundiseni, kwiYunivesithi yi embindini ukuvela idealism baseJamani lesishwankathelo kwangethuba.
Njenge ye 2014, eyunivesithi anayo macala 19,000 abafundi ababhalise kunye 375 oonjingalwazi. umongameli wayo ngoku, Walter Rosenthal, wonyulwa ngo 2014 ye 6 kwiminyaka elide.
The Friedrich Schiller University Jena, esakhiwa 1558, kunye yayo 21,000 abafundi zisasazwe amandla ezilishumi ezahlukileyo amagqabi uphawu yayo lomfanekiso kwedolophu. Abafundi nokuba eyunivesithi okanye kwiyunivesithi zenzululwazi isicelo ukwenza ikota enye abemi Jena. ke, kuyinto efanelekileyo ukuba bathi: Akukho kwiyunivesithi Jena, Jena yiYunivesithi! Malunga 340 oonjingalwazi kunye 6,400 amalungu abasebenzi abasebenzi kwiYunivesithi neyunivesithi esibhedlele, ngasekupheleni nekwenza phuhlisa ibe omnye nezibhedlele mihla eJamani.
Iyunivesithi ubeka zigxininisa ekuseni kakhulu unonophelo abafundi yayo, kwaye usebenza nokudala “abafundi’ Yiparadesi Jena. iinkqubo ezizodwa inkxaso kubafundi abavela kwamanye amazwe. Xa kufikelelwa kumbandela wokufundisa, Jena University idibanisa izithethe kunye ezintsha: Ngaphandle amayeza, physics, bengqondo, izifundo zoshishino economics, okanye kwimidlalo, bio nezentlalo nenzululwazi – zonke ezo kudidi kakhulu – ukuze ebizwa- “kwizifundo ezincinane”, ezifana umzekelo caucasiology, izifundo IsiRomanian okanye Indo-zaseJamani, usekwa. Uluhlu olubanzi lamathuba ukufunda eyunivesithi classical kuphela eThuringia ngayo imilo imbonakalo yawo kwakunye isimo sayo: ukwenza ngaphandle kwemida – interdisciplinarily nakumazwe. ngoko ke, iprofayili uphando ecacileyo sele ikhona kwaye ziya kuphuhliswa ngakumbi. iprofayile uphando lwangoku Jena University libunjwa imimandla emihlanu yophando ephambili:
ukugqama, Photonics kunye Photonic Technologies
Materials zosungulo Technologies
UNdoqo Systems Biological Complex
Abantu kunye Change Social
Baya kugqitywa ezifundweni emnqamlezweni-amacandelo amathathu:
Uhlahlelo noLawulo Systems Complex;
NemiXholo yeNkcubeko Ageing;
EYurophu Origin: NeNkcubeko kunye Unqulo Ancient World kunye na-
Up-kwaye-esiza izazinzulu abaselula balungiselelwe kakuhle ukulungiselela amakhondo omsebenzi abo ukusukela ukuba ixhaswa Jena Graduate Academy. Ngako oko, kwisihloko ebalulekileyo “axhase umntwana” livela kwi ajenda yeYunivesithi. Njengoko omnye wabaseki “Jena Alliance for Family”, Jena University imela zokungahambisani ukuba abantwana bafunda. Yale, kokuba ufumene Total E-Quality Award. The Friedrich Schiller University kwakhona kumazwe kakuhle edumileyo: Oku kunxulunyaniswe uthungelwano ezibalulekileyo, efana Coimbra Group, kwaye ithobela ngaphezu 100 ziiyunivesiti okanye amaziko emfundo ehlabathini. phantse 300 namaqabane ngaphakathi eYurophu asilonaniselwano ocacileyo abafundi kunye nootitshala uthatha indawo.
in 2008 Jena sele inikiwe isihloko Germany ngayo “City of Sciences”. 2008'S iziganeko bachaphazeleka ngamandla kwimisebenzi yeYunivesithi. kwaye, kwilixa elizayo, eyunivesithi ufuna ukugcina nempembelelo enamandla ekufundiseni, uphando kunye nenkcubeko, kuzwelonke nakumazwe ngamazwe.
BeeSayensi zezeNtlalo bokuziphatha
Neyezinto Earth Sciences
Phakathi kwiminyaka nje embalwa ye revolution lwezopolitiko eMpuma Jamani isixeko encinane Thuringian university of Jena iye yakhula yabenza liziko ebonakalayo jikelele yokufunda. Umoya utshintsho evelele, kodwa nangona lo obutsha ubheka bekhumbula phezu isithethe grand: Goethe, Schiller, Hegel and Fichte washiya uphawu labo ubomi ngokwasengqondweni, Abbe, Zeiss kunye Schott wazibeka iziseko impumelelo kwezoqoqosho.
i kalukhuni 25 000 abafundi Friedrich Schiller University kunye neYunivesithi of Sciences Applied kunika nangokuvulelekileyo ngonaphakade bolutsha ukuya emzini 100 000, leyo ingqongwe emaweni muschelkalk kunye nendawo fantastically kwi Saale emlanjeni intlambo. Izizukulwana neembongi, zefilosofi kunye nabafundi Awuhlabele ingoma iindumiso yayo ingoma kunye nemibongo, mhlawumbi kakhulu ngobuhle Gottfried Benn: “Jena phambi kwethu, entilini esimnandi“. Yonke enye iya inkcubeko awunakuphepheka — ngaphezu koko, ukuba Romanticism, Classicism, kunye Gründerzeit. A bahluke Umfundi Indlela yokuphila nayo yaqala Jena waza wahlabela mgama etyhulu esisiseko kwipolitiki eliphezulu: apha kulapho wabumba zomanyano umfundi yokuqala, ogama omnyama-red-igolide ibhena, namhlanje imibala kazwelonke, kuye uphawu umoya wentando womanyano, ubulungisa inkululeko ukususela kwintlanganiso eya kuba kwiziko ngoJulayi ngo 1817. Fraternities abanakho ukudlala enkulu indima Jena kwinkulungwane yama-20 emva kwexesha, kodwa memory yale ukuvela yedemokhrasi siyakhuselwa nje kuphela ezi ama of neeribhoni ezimibalabala neminqwazi.
iinguqu ezinkulu kunye notyeshelo ukususela elidlulileyo kubonakala ukuba zisoloko elithile of Jena. Xa oonjingalwazi ezimbini zokuqala, Stigel and Strigel, zabo 171 abafundi bafudukela kweli ukuya Collegium Jenense, ngaphambili Dominican monastery, e 1548, nobukhosi kwabo, UJohann Friedrich I, esese esitokisini asebukhosini. njengokuba “ingumkhokeli” i Schmalkaldian ongumProtestanti Alliance Wettin yoNyulo Prince ubunzima bazoyise ezinkulu emkhosini nxamnye isithsaba yamaKatolika yaye lokuncamela esihlalweni sakhe endala neyunivesithi yaseWittenberg umza wakhe ndamthiya Moritz. In ngoku mmandla phantsi kolawulo lwakhe, nto leyo zinciphe omnye-wesithathu ubukhulu bayo zangaphambili, wanyula Weimar njengoko isihlalo omtsha karhulumente nisekelwe kwidolophu ekufutshane of landholders ezincinane kunye newayini-abalimi a high Schule (ikholeji) ukuze kuqeqeshwe abefundisi yobuProtestanti kunye nootitshala. Kuphela zenani “indawo Electoralis” of Friedrich Wesilumko wasindiswa, walanda ophum ukuya Jena.
Kule mihla la matyendyana academic zange kanye ngezandla ezishushu, — nokuxolelwa oonjingalwazi ukusuka irhafu utywala kunye nesimilo Nezibugqagala-and-ukulungele abafundi babo, owathi ngenxa iqondo elikhulu okuzimela ngokomthetho enokungacingelwa nakancinci ukuba atshutshiswe kwiinkundla zasekuhlaleni, ibe iliva ecaleni abemi tye. bethu, nokuba, i humanistic, iziko lemfundo yotshintsho-ezijolise wenza ephala ngokukhawuleza kuphuhliso yayo; yi yee-1550s Jena ukuba sele kuthathwa njengeziko aphambili yoHlaziyo, kunye ushicilelo Jena yemisebenzi kaLuther ukuba kwangaphezulu iprojekthi ezikhuphisanayo e ophum. Kodwa kwaba 1558 ukuba Jena high Schule wafumana ilungelo yasebukhosini eyunivesithi.
kalukhuni 100 kweminyaka kamva, ophume ekuqaleni yaseyunivesithi zohlaziyo era mihla kunye namacandelo amane — ifilosofi, Theology, Umthetho Medicine — beqale ukuba uluntu uphando kunye izinto ezahlukahlukeneyo kakhulu. Sezibalo kunye ngeenkwenkwezi Weigel, owafundisa Leibniz, phakathi kwabanye, sithathwa njengomnye wabaseki ingcamango zenzululwazi. Ezi esineengcambu yaseyunivesithi, kanye zityatyambile, beliya i walithiywa “hoarder ulwazi”. Umntu othe waphuma endleleni yakhe, ukuba adumise omkhulu onjalo yaba, xa “INtsumpa of Amanyathelo ngqo in Science and Art”, nakanye omncinanana ukubulela le uphuhliso: noceba yangasese uJohann Wolfgang von Goethe azimiseleyo afuna iinkcuba abemi kunye nabaphandi ukuya duchy amancinci zephondo ngocwangco wadala iimeko ezilungele umsebenzi wabo. amathala, Botanical, unendawo imbali yendalo kunye neelabhoratri bazizisulu yonke uMariya sezemali ukuze. Namaziko afana ne-Observatory kunye nokuqokelelwa mineralogical kufumaniseka ukuba aba lolu umva kwiindima yakhe. Ngelo xesha namabhongo lwesayensi Goethe ukuba uncedwa kulo iziseko. Wasebenza ngokusondeleyo yemichiza Doebereiner, umsunguli kwenkqubo ezithile, kunye anatomist nguYusto Loder. ukufuna kwakhe yimpumelelo kuba ithambo intermaxillary kuthathwa omnye weyona mizekelo zokuqala uphando lwezonyango ekujoliswe kulo kwiilwimi zesiNtu; zasemanzini eziqulunqwe imbongi-liyakuhlala nangoku ezigcinwe kwi yokwakheka Ukuqokelelwa i-University of Jena.
kuthathwe, nangona, kwiminyaka wonder classical-uthando kwaba kudala “inethiwekhi”, leyo phantsi kweemeko libalaseleyo kwahlanganisana greats ephawulekayo ngokwasengqondweni endaweni enye. ka Krestu, Fichte and Schelling, Voss, abazalwana Schlegel and Friedrich Schiller — njengoko unjingalwazi wembali — ngabafundiswa kweso sixeko kwi Saale, kanti Novalis, Hölderlin, Brentano, Föbel and Arndt bahlala kumaholo zabo.
Kule mihla nje amagama ezitalato kunye umonakalo, kodwa ngothando zibuyiselwe izakhiwo, singqine ukuba ngeli xesha: indlu igadi umzekelo Schiller kaThixo, ekhaya Fichte kaThixo, yokuhlala umphathi kaThixo Goethe kule Botanical, okanye i Fromann House, leyo namhlanje ukhonza Institute for izazi German kunye mbali bobugcisa. Le xi okumangalisayo inkcubeko ngaloo minyaka, leyo kwaphawula sisiqalo nolutshintsho kwezinya inkcubeko kunye nezenzululwazi ezinkulu Ernestine ubukhosi bakhe iwele, ngoku ke isihloko DFG (Research Council German) Project Research yokusebenzisana “i Weimar – Jena. Culture malunga 1800”.
Ke sona isiseko igama ngamazwe njengeziko mveliso Jena kaThixo azidalwanga de malunga 70 kwiminyaka kamva constellation yogqabhuko ubuntu — kwakhona apha eyunivesithi. ngqo engineering Zeiss kunye optic zezityalo kunye imichiza yeglasi isebenza Schott & Gen. weza ukuba phantse namashishini olusukela kolunye ngaphandle Alma Mater — lukhulu ngendlela efanayo abaninzi silibone ukuvuselelwa eJamani indawo eliphezulu-zobugcisa ngokusebenzisa dovetailing n'wina inzululwazi kwezoshishino. Olu hlobo intsebenziswano phakathi eyunivesithi kunye noshishino ekhulisa ngokwemvelo Jena, kungathi.
Umfutho ukuvela kulo yobudala zoshishino wanikwa ngu Ernst Abbe (Wamisa uProfesa nobudlelwano 1870), ngubani, ngoxa 30 bakhe, eziphuhliswe imfundiso yakhe microscope image Ukwakheka, leyo kuthathele ingqalelo isenzeko aziqhelileyo diffraction, yaye ngaloo ndlela wenza oko kwakhokelela ekwandeni ukwakhiwa microscope evela amaphutha kuyilo lwemethodoloji. Wanikwa lo msebenzi yi oomatshini eyunivesithi, Carl Zeiss, lowo kuthechu ukugqibelelisa ulwakhiwo lwezixhobo enombala kwiindibano bakhe ngasese. Otto Schott, abafumene isidanga sobugqirha yakhe Jena ngo 1875, yaba nowesithathu ukuze ungene kwesi umfelandawonye ngokuthi kokudala, ngokubongozwa Abbe kaThixo, i “Laboratory Glass Technology” e 1884, ukuvelisa iilensi ezizodwa kakhulu Wamnika iimikroskopu Zeiss kunye nezixhobo optical. umfundi Humboldt ka-Matthias Jakob Schleiden, UNjingalwazi Botany kunye wayedume imfundiso yakhe cell, wakhuthaza — yaye kamva wazuza — le nkqubo, eyayiza kuba ngumzekelo kwimbali German yezoqoqosho.
Impumelelo kwisityalo Zeiss wazisa abasebenzi ezininzi ofanelekayo kakhulu kuwo umzi, kunye labemi wavuka amba 150% kwi ixesha 1870 ukuya ekujikeni kwenkulungwane, cishe 25 000. Le ndyebo entsha, leyo Zeiss and Abbe yabiwe yabasebenzi ibe ngummiselo ubuvulindlela kwezentlalo inguqu Ekuqaleni lweshishini ibe isiseko, nazo zalandela iingeniso umzi neyunivesithi: umzekelo Volkshaus, iziko kwezenkcubeko holo yekonsathi, yayisakhiwa ngemali Zeiss, yaye xa oonjingalwazi kunye nabafundi safudukela kwisakhiwo esitsha kwi isikhumbuzo 350 yeyunivesithi 1908, iminikelo Zeiss Foundation hayi nanimbalwa ukubulela le. Lo mnikelo eyodwa enkulu abucala amahle isakhiwo Art Nouveau yicawa ophum yeqonga umyili Theodor Fischer weza evela Otto Schott.
Ixesha-kweminwe phakathi Gründerzeit kunye Weimar Republic, ngokuba Jena njengeziko namhlanje yokufunda, mhlawumbi ebaluleke ngaphezu era classical-romantic esiphindwa okhankanywe. Le eziphilayo Ernst Haeckel, i ingcali yale ibalulekileyo yendaleko emva Darwin, wayefundisa Jena, njengoko wenza sezibalo kunye logician Gottlob Frege, lowo phambili zobulumko owayephila Anglo-Saxon aziphawulayo ibe nempembelelo. Kwakhona Kubalulekile ukuphawula ukuba Hans Berger, eyafumana ngayo electroencephalogram (EEG), kugqirha Otto Binswanger, sobulumko Rudolf Eucken, le mbali uJohann Gustav Droysen and Alexander Cartellieri, i Philologists Sievers and Delbrück, i pedagogues ngokutsha Stoy and Petersen, i mgwe- Eduard Rosenthal no Max Wien, omnye vulindlela of telegraphy wireless. Jena banandipha ngexesha layo kubugcisa entle sibulela avant-garde circle ezijolise lamagcisa kugxile Eberhard Grisebach and Botho Graef: emva kwihlazo Weimar Auguste Rodin wafumana ubugqirha Wawongwa ngo 1905, kwaye kule minyaka 1907-09 UFerdinand Hodler wadala womzobo odumileyo nenqwaba “abafundi German siyanduluka; War of Liberation ka-1813” ngokuba iholo entsha isifundo eyunivesithi. Ukusebenza utyelelo kunye imiboniso eyenziwa Expressionists eziphambili kwaye uqhagamshelwano Weimar Bauhaus washiya uphawu labo ubomi yokuluka esi sixeko.
Naphezu — okanye mhlawumbi ngenxa yokuba — isimo sayo Libertarian kwanda ngqwabalala ebahleleyo koongqondo Jena ngowe-1920 yee. Ingqiqo imodeli National Socialist eyunivesithi ngokukhawuleza iphela, kunye nabameli ephambili theory yobuhlanga ukubulawa wamisa apha — kufutshane ngoko nangoko kwinkampu yoxinaniso Weimar-yaseBuchenwald.
Emva kwisigaba emfutshane lahlukene emva 1945 Alma Mater kwakhona ibambeke kwi akho urhulumente kwezopolitiko, kwaye ngoku kulindeleke ukuba ephilayo lube “eyunivesithi yobusoshiyali”. Umfuziselo obubonakalayo oku “uphando eziphakamileyo”, elakhiwa 1967-72 ngokwezicwangciso yi GDR inkwenkwezi umyili Herbert Henselmann kwaye ekuqaleni bekujongiwe Veb Carl Zeiss karhulumente, apho izifundiswa kwafuneka ukuba ahambe. E 127m lo umqondiso elidumileyo yobusoshiyali iinqaba lwezakhiwo ngegqudu ngaphezu kwesixeko Saale. lyo: emthunzini wawo kuvele umoya nokumelana ezonakalisayo, kunye Jena kwakuthathwa njengenqaba ophikisana kwi GDR.
in 1989 oonjingalwazi kunye nabafundi wabonisa ezitalatweni kunye; iingxaki on inkululeko ingqondo sele waziva ndawo bamcudisela kangaka mhlawumbi njengoko kwimihlaba zophando kunye nemfundo. Ngoko nangoko emva kokuba revolution lezopolitiko i-University of Jena kwenziwa amanyathelo kakhulu kwaye kunzima: wonke utitshala yahlaziywa, kwaye ngaphandle zamasebe akhoyo ngaphambili kwasekwa ubume ezilishumi a ulinywa, classical, eyunivesithi esibanzi — eyunivesithi enjalo kuphela eThuringia. A campus entsha ibisekelwe kwisiza yangaphambili zesityalo eziphambili Zeiss entliziyweni mzi, kwaye iprojekthi yokwakha-uphawu billion “University Clinic 2000” kweCape. Bejonge inkqubo yokufundisa nayo le yunivesithi wathatha izithethe ezindala: i obuziintlobo ezininzi kakhulu zefilosofi Faculty, umzekelo, apho ezibonakala “exotic” emasimini ezifana Oriental Ancient, Studies abaseAfrika kunye Indo-zaseJamani, baye bafumana ikhaya. Okanye kwi Faculty Medical, leyo ithathe indima umkhathaleli phezulu kubo bonke eThuringia kwikliniki yayo esililini-1400. Kakade physics kunye nenzululwazi eziphilayo bafanelwe ikhankanya.
Ufikelelo kunye nothungelwano lophando inxulumene izinto ezifihlakeleyo ekuvuselelweni lomzi kwi Saale njengeziko lemfundo. abalawuli abaninzi kunye neentloko zamasebe ngokwamaziko non-kwiyunivesithi Jena aba professorships eyunivesithi. Beyond koku Uni Jena igcine ubuhlobo eyunivesithi kunye Halle and Leipzig. Kwabiwe, kwiimeko ezininzi iiprojekthi ezixuba, umzk. kule mihlanu DFG Collaborative Research Centres Innovationskollegs ezisixhenxe (intetho uthotho), iziphumo zendalo. Le sezulu otyebileyo olinde wonakalisa malunga Umtya wonke lweendawo engaqhelekanga kwaye ethembisa kuphando, uninzi lwazo lukho qho ahlukeneyo phakathi networks lwentsebenziswano.
Kodwa ke isimo sezulu Jena kwakhona kubonakala ukuba ukuba nempembelelo entle ekufundiseni: ubudlelwane zengcebiso phakathi abafundi kunye nabahlohli xa ikuthelekiswa elungileyo, — ngenene kangangokuba ithemba ikhondo ngokukhawuleza nebanzi izifundo azixhokonxa inani kubonakala elikhulu labafundi ukunika Alma Mater amanqaku abo aphezulu kwezi zixeliweyo eyunivesithi zakutshanje ngu “Spiegel”, “Stern” yaye “Stiftung Warentest”. Yeyona injongo eliqhelekileyo kwabo onoxanduva eyunivesithi, yaye kwinqanaba isixeko kwaye xela ukuba le uphuhliso kufuneka uqhubeke kuphazamiseke.
Uyafuna ukuxoxa Friedrich Schiller University of Jena ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Friedrich Schiller University of Jena kwi Map
iifoto: Friedrich Schiller University of Jena ezisemthethweni kwiFacebook
Friedrich Schiller University of reviews Jena
Dibanisa ukuxoxa of Friedrich Schiller University of Jena.